Iyo iPhone 7 inowanikwa mune vhidhiyo nyowani | IPhone nhau
Iyo iPhone 7 inoonekwa muvhidhiyo nyowani kubva kumativi ese
IPhone 7 pfungwa ine Kubata ID Kubata
Isu tinoenderera mberi neiyo frenetic kumhanya kwekudonha uye ruzivo rutsva kubva kuiyo iPhone 7, zvekuti handirangariri, kunyangwe ndingave ndakanganisa, kuti gore rapfuura takagamuchira ruzivo rwakawanda kubva kuiyo iPhone 6s muna Chikunguru. Vhiki rino chete isu takadzidza iyo Apple akanyoresa iyo AirPods brand, iyo mabhenji ekutanga yemuenzaniso weiyo inotevera Apple smartphone uye vhidhiyo pfupi inoratidza a iPhone 7 hapana chiteshi chefoni. Nhasi zvaonekwa imwe vhidhiyo, iyi yakareba uye zvirinani kuratidza inotevera iPhone.
Sezvo OnLeaks yakanga yatofambira mberi, iyo iPhone 7 inoonekwa mune inotevera vhidhiyo iri, sekufunga kwangu, yaifanira kunge iri iyo iPhone 6, ndokuti, yakafanana chaizvo nemodeli yakatangwa muna2014 asi iine mashoma tweaks iyo inonatsa mufananidzo wako. Muenzaniso wakajeka ndeweiyo yemitsetse yema antennas ayo asisiri kuyambuka terminal kubva muchikamu kuenda kune chikamu, asi anoramba ari kumusoro uye ezasi kumakona.
New iPhone 7 vhidhiyo
Dzimwe shanduko huru zvinhu zviviri zvatakataura nezvazvo zvakawanda munguva yakapfuura: kusavapo kwechitokisi chefoni uye a imba hombe isina chindori chekudzivirira, kuva nechavo deformation mune iyo casing iyo zvakare inoita kuti iite yakati rebei. Muvhidhiyo tinogona zvakare kuona chimwe chinhu chinonakidza chisina kuoneka mumadhirama ekutanga, asi mukudonha kwazvino: iyo iPhone 7 ichave iine vatauri vaviri, iyo ichavandudza ruzha kana tisingashandise mahedhifoni.
Kwenguva yekutanga mune iyi mhando yemifananidzo, tinogona kuona kumberi kweiyo iPhone 7 uye kwete, bhatani repamba kana Kubata ID haizobate, kana zvirinani haizove mune iyi modhi kana ichinge yakasimbiswa kuve yechokwadi. Zvinondirova kuti zvese zvatiri kuona mumazuva achangopfuura zvinoratidza iyo 4.7-inch iPhone, iyo yakaganhurirwa modhi iyo zvinoenderana nerunyerekupe kuti ichasvika isina mbiri kamera uye isina Smart Connector. Nei ndiri kutaura izvi? Zvakanaka, nekuti mune chimwe chinhu chisingadiwe nemushandisi, zvinoita sekunge muna 2016 Apple ichabheja pane iyo iPhone 7 Plus uye isu hatigone kutonga kuti iyo 5.5-inch modhi inosvika neiyo 3D Kubata ID.
Kune rimwe divi uye semazuva ese, isu tinofanirwa kuramba takakahadzika uye kwete kupa vhidhiyo yapfuura sechimwe chinhu chepamutemo Chero zvazvingaitika, kana rwizi ruchirira ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Iyo iPhone 7 inoonekwa muvhidhiyo nyowani kubva kumativi ese
Ini ndinofunga zvakanaka kwazvo kuti mahedhifoni anoenda netambo yemwenje kwete jack ... Asi sezvo tekinoroji iri kufambira mberi uye nekuwedzera maapuro ... ndinogona kutora headset yeBluetooth ndobva ndakanganwa zvachose nezve tambo.
Chero ani zvake ane mahedhifoni ebluetooth uye haichazove tekinoroji yeantant-garde, kure nazvo. Ngatitarisirei kuti chimwe chinhu chitsva chaizvo uye ngatiti waauuuu ikozvino kana Apple yarova chipikiri mumusoro zvese pasoftware uye padanho rehurongwa uye pakupedzisira ichipfuura makwikwi kwete chete musoftware. Sezvo mune Hardware yatove kure kumashure kwenhau dzevamwe vazhinji.
Panyama ndiko kurumbidzwa
zvine mutsindo zvakafanana ne ip6
Ndeipi hooooorrriiiiible mbozhanhare nguva ino vapfana vakakwenya kumusoro
Pokémon GO yaive pasi pasi nezuro neDDoS kurwisa